Ukukhiqiza kuze kufike phezulu: Ungalusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lweBrain ngokujulile? | Kusuka kuLinux
Ngemuva kokuthunyelwe kwethu kwangaphambilini mayelana nenguqulo yakamuva ezinzile nezindlela ezingenzeka zokufaka okuthakazelisayo futhi okuwusizo umthombo ovulekile nesicelo se-cross-platform shayela Brain, evumela thuthukisa umkhiqizo womsebenzisi kudeskithophu yamakhompyutha abo, sizoqhubeka nalesi sifundo sendlela yokuyisebenzisa.
Konke ukuze kuchazwe kangcono ukusetshenziswa nokuphathwa kokunye okuhle kakhulu noma okusebenzayo kakhulu ama-plugins onakho ukufeza i- Inhloso yokwandisa umkhiqizo wethu kukhompyutha yethu, ikakhulukazi lapho befake ifayela le- Isistimu yokusebenza yamahhala nevulekile, njenge I-GNU / Linux.
Kuhle ukuphawula lokho Uhlelo lokusebenza lobuchopho, akusona isicelo esisindayo ngokweqile, okungukuthi, sisebenzisa kakhulu Izinsiza ze-CPU, i-RAM noma i-HDDKodwa-ke, kulabo basebenzisi abahlala befuna ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza kumakhompyutha abo okungenani, kuhle ukukucacisa lokho Brain kungabenza badle inani elithile eliyigugu labo, ikakhulukazi lapho lisetshenziswa, ngoba ngesikhathi sokuphumula, nakanjani ukusetshenziswa kwayo kwemithombo yamukeleke kakhulu.
Ubuchopho: I-Open Cross-Platform App yokukhiqiza
Ngakho-ke akunconywa ukuyisebenzisa uma nakanjani kuyikhompyutha enezinsizakusebenza eziphansi noma ufuna ukusebenzisa okungcono kakhulu% ngayinye yezinsizakusebenza zekhompyutha yethu kwezinye izindawo noma imisebenzi.
1 Ukukhiqiza ku-GNU / Linux: Ukufunda ukusebenzisa iCerebro
1.1 Ukusetha kokuqala kobuchopho
1.3 Izindlela zokuskrola
1.4 Izinqamuleli zekhibhodi (HotKeys)
1.4.1 C ukhiye
1.4.2 Ukhiye E
1.4.3 M ukhiye
1.4.4 O ukhiye
1.4.5 P ukhiye
1.4.6 Q ukhiye
1.4.7 R ukhiye
1.4.8 Ukhiye S
1.4.9 Ukhiye T
1.4.10 U ukhiye
1.4.11 V ukhiye
1.4.12 Okhiye 1 kuya ku-9 nokhiye »*«
1.4.13 Okhiye »+» futhi »-«
1.4.14 Ukhiye othi "Arrow up"
Ukukhiqiza ku-GNU / Linux: Ukufunda ukusebenzisa iCerebro
Ukusetha kokuqala kobuchopho
Ukucushwa kokuqala nokubalulekile kweCerebro kuyisisekelo kakhulu. okwakhe iwindi lokumisa ubilisa ngamapharamitha alandelayo:
Ukhiye Wokufinyelela Okuqondile (HotKey): Kulesi sigaba uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ulungiselele ukuhlanganiswa kokhiye abadingekayo ukuze kusebenze uhlelo lokusebenza ngaphandle kwesidingo igundane (igundane). Ngokuzenzakalelayo, inhlanganisela yokhiye ilungiselelwe «Ctrl+Space». Kepha kuyivumela ukuthi iguqulwe uma sizibeka ebhokisini lombhalo bese sicindezela ukhiye «Ctrl» futhi ngaphandle kokuyikhipha, sicindezela ukhiye wesibili ukushintsha (ukufaka esikhundleni) ukhiye «Space».
Izwe (Izwe): Kulesi sigaba singakhombisa iCerebro izwe lethu lamanje, ukuze kamuva, lisebenzise lolu lwazi ukwenza ngezifiso noma nokwandisa idatha ukusinikeza yona. Isibonelo, nge i-plugin (ama-plugins) de isimo sezulu sezulu) sinikeze imininingwane ecacile futhi eqondile.
Ingqikithi: Kulesi sigaba sivunyelwe ukukhetha i-Theme ethile ukushintsha isici esibonakalayo sohlelo lokusebenza lesikhombimsebenzisi sokuqhafaza. Futhi-ke, letha ingqikithi «Dark», evame ukwaziswa kakhulu abaningi.
Izinketho ezahlukahlukene: Ekupheleni kwe- iwindi lokumisa, siboniswa uchungechunge lwezinketho ezibizwa ngokuthi:
Vula ekungeneni ngemvume: Ukutshela uhlelo lokusebenza ukuthi lilayishe lapho uhlelo lokusebenza luqala futhi umsebenzisi angena kulo. Le nketho inikwe amandla ngokuzenzakalela.
Bonisa kubha yemenyu: Ukutshela uhlelo lokusebenza ukukhombisa isithonjana esifanayo, kubha yomsebenzi ngaphezulu kwendawo yesaziso se-Desktop Environment esetshenzisiwe. Le nketho inikwe amandla ngokuzenzakalela.
Imodi kanjiniyela: Le inketho esezingeni eliphakeme esetshenziswa yilabo abazinikele ukulungisa iphutha lohlelo, ngakho-ke, le nketho ayenziwa isebenze ngokuzenzakalela, futhi akunconywa ukuthi uyisebenzise ngaphandle kokuthi ungumsebenzisi othuthukile.
Imiphumela ehlanzekile kufihle: Le nketho itshela uhlelo lokusebenza ukuthi lisuse usesho lwethu nemisebenzi yangasemuva njalo lapho iqala phansi. Le nketho inikwe amandla ngokuzenzakalela.
Thumela izibalo ezingaziwa - kudinga ukuqala kabusha: Lolu khetho luyatholakala ukuvumela ukuthunyelwa kolwazi ekusetshenzisweni kohlelo lokusebenza konjiniyela balo ukuze balusebenzise, ​​ukulenza ngcono. Le nketho ayenziwa isebenze ngokuzenzakalela.
Thumela imibiko yokuphahlazeka okuzenzakalelayo - idinga ukuqala kabusha: Lolu khetho luyatholakala ukuvumela ukuthunyelwa kolwazi mayelana namaphutha wohlelo konjiniyela balo ukuze balusebenzise, ​​ukulenza ngcono. Le nketho inikwe amandla ngokuzenzakalela.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwegundane ukuhambisa kuhlelo, kuvumela ukusetshenziswa kwekhibhodi ukuhamba ngaphakathi kwalo. Izinkinobho ezihlelelwe lokhu yilezi ezilandelayo:
Side isiqondiso imicibisholo « <- -> » y « ctrl + j/k » asetshenziselwa ukukhetha into elandelayo noma eyedlule.
Okhiye « enter » kanye nencwadi « o » asetshenziselwa ukukhetha into.
Okhiye « escape » noma umcibisholo wesobunxele « <- » zisetshenziselwa ukubuyisela ukukhetha emuva ohlwini lwemiphumela eyinhloko.
Izinqamuleli zekhibhodi (HotKeys)
Ukusetha Ubuchopho (Bheka Ukucushwa)
Uhlobo lweBongo (Bheka inombolo yenguqulo)
Susa Udoti (Chitha udoti)
Ukuphuma kobuchopho (Vala uhlelo)
Thulisa (Vala ivolumu yekhompyutha)
I-WiFi ivuliwe (Vula idivayisi ye-WiFi yekhompyutha)
I-WiFi icishiwe (Vala idivayisi ye-WiFi yekhompyutha)
Phatha ama-plugins (Phatha ama-plugins weBrain)
Ukuyeka Ubuchopho (Phuma ohlelweni ngokuluvala)
Layisha kabusha (Phinda ulayishe uhlelo)
Sleep (Nika amandla ukusebenza kwe-computer hibernate)
Vala shaqa (Nika amandla umsebenzi wokuvala ikhompyutha)
Susa ukuthula (Vula ivolumu yekhompyutha)
Okhiye 1 kuya ku-9 nokhiye »*«
Brightness (Izinga lokukhanya kwesikrini)
Okhiye »+» futhi »-«
ivolumu (Izinga levolumu yekhompyutha)
Ukhiye othi "Arrow up"
Kwenziwe umyalo wokugcina (Kwenziwe umyalo wokugcina)
Okwamanje, Brain inokulandelayo ama-plugins atholakalayo, esizokhuluma ngazo ngokuhamba kwesikhathi nangemininingwane ukwenza lula ukusetshenziswa kwazo nokuqaliswa kwazo, kuvuna i- ukukhiqiza yabo bonke abasebenzisi bayo, ngaphandle kohlelo olusebenzayo olusetshenzisiwe.
Ngokwami, ngicabanga ukuthi kungaba ngcono kune Ubuchopho kufanele buthuthuke kulokhu okulandelayo ukusetshenziswa kangcono:
Vumela ukushintsha usayizi wewindi lokucushwa.
Vumela ibha yokucinga entantayo iye kudeskithophu.
Funa ukuhunyushwa kwalo ngezilimi eziningana, ikakhulukazi iSpanishi.
Hambisana kakhulu nezinguqulo zesimanjemanje zokusabalalisa kwe-GNU / Linux.
Vuselelwa njalo, hhayi nje ukugxila kuzengezo ezinhle ezingeziwe.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Cerebro», okwesibili kokubhalwa kwami ​​kanye nokwesithathu ku-Blog, kusiza ukusetshenziswa nokujwayela uhlelo olusetshenzisiwe kulabo basebenzisi abazimisele ukukhulisa umkhiqizo wabo kumakhompyutha abo, futhi ngenxa yalokho, inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukukhiqiza okuphezulu: Ungalusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lweBrain ngokujulile?
Ekusetshenzisweni kwalesi sitayela ngithanda u-'Albert '.
Siyabonga ngokuphawula kwakho nokusikisela kwakho. Sengivele ngivivinya u- "Albert" futhi kubukeka kukuhle impela. Ngokuqinisekile ngizokwenza i-athikili ngaye kungekudala.
Okwamanje, ngizobe ngenza i-athikili yesithathu neyokugcina kuCerebro, ikakhulukazi ekusingatheni ezinye izengezo (ama-plugins) eziwusizo kakhulu okumele zikhuphule umkhiqizo wazo.
Ngisebenzise ubuchopho isikhathi eside yaze yaqala ukunginika izinkinga, futhi kungukuthi ukugcinwa / ukuthuthuka kwayo kubonakala kumile; Akukaze kubuyekezwe kusukela ngo-2017. Inguqulo engu-3.1 ingisebenzele kodwa u-3.2 akakaze angisebenzise. Ngakolunye uhlangothi, i-Alber ibonakala ingcono kuleyo ndaba.
Okwamanje, uma ufisa, ungafunda i-athikili yesithathu neyokugcina kuCerebro, ikakhulukazi ekuphathweni kwamanye ama-add-on (ama-plugins) awusizo kakhulu okufanele akhulise umkhiqizo wawo: https://blog.desdelinux.net/complementos-cerebro-plugins-aumentar-productividad/
IDevuan 3.0 Beowulf ifika ngesisekelo seDebian 10.4, iKernel 4.19 nokuningi